Somalia: Faroole Iyo Sh. Shariif Oo AMISOM Waydiistay Ciidamo Ka Ilaaliya Alshabaab Iyo Ciidanka Xasan Sheekh Wakhtiga Ololaha Doorashada - Wargane News
Home Somali News Somalia: Faroole Iyo Sh. Shariif Oo AMISOM Waydiistay Ciidamo Ka Ilaaliya Alshabaab...
Faroole Oo Naftiisa Ku Aamini La’ Maleeshiyaadka Magaalada Muqdisho Ilaalo Gaar Ahna Ka Kaxaystay deegaankiisa Iyo Garoowe
Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in Madaxweynihii hore ee Maamulka Muqdisho dalka Soomaaliy, Sheekh Shariif sheekh Axmed iyo Madaxweynihii hore ee maamul Goboleedka Puntland C/raxmaan Sheekh Maxamed Faroole ay codsi hordhac ah gaadhsiiyen Taliska ciidamada AMISOM ee magaalada Muqdisho. Wararku waxa ay sheegayaan in labadaasi mas’uul ay codsigooda ku cadeeyen inay aad uga cabsiqabaan inay la kulmaan xaalado amni darro inta ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Sheekh Shariif iyo Faroole ayaa Taliska ka dalbaday inay siiyaan ciidamo gaar ah oo ka tirsan kuwa AMISOM, si ay uga badbaadan weeraro kaga imaada dhanka dowlada Somalia iyo Al-shabaab.
Sheekh Shariif iyo Faroole oo ka mid ah musharixiinta u taagan doorashadda la filaayo in Somalia ay ka dhacdo dabayaaqada sanadkaani ayaa Taliska ka dalbaday inay isku taxluujiyaan inay ka samatabixiyan xaalada cakiran ee lagu jiro, sababo la xiriira amaanka muqdisho oo aan leysku haleynkarin xiliga doorashada. Dalabka labada Musharax ayaa ku xeeran keliya mudada ay socto ololaha doorashadooda iyaga oo wixii intaa kadib ka maarmi doona ciidamada AMISOM. Taliska AMISOM ayaa sheegay in amar aysan u qabin inay ilaaliyaan amaanka cid waliba oo musharax ah, waxa ayna carab dhabeen in amarka ay qabaan uu yahay keliya mid ku eg inay sugaan amniga musharaxiinta horay dalka Somalia uga soo noqday Madaxweyne ama Ra’isul wasaare wixii intaa ka baxsana aysan damiinadqaadi karin xaqiijinta amaankooda. Taliska waxa uu sheegay inay damiinadqaadi doonaan keliya amniga Musharaxa sida ba’an taageerada uga dhex leh Somalia ee horey soo maray Hoggaaminta dalka Somalia Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Madaxweynihii hore ee maamulka Puntland C/raxmaan Faroole ayaa iminka heysta ilaalo gaar ah oo uu doonaayo inuu kaga gudbo ololaha doorashooyinka, halka ilaalada Muqdisho loogu diyaariyay Sheekh Shariif ay kor u dhaafayaan 300 kuwaasi oo u badan kuwii la shaqeyn jiray xiligii uu xilka hayay.
Sheekh Shariif ayaa taageero xoogan ka heysta dowlada Ugandha oo la rumeysan yahay inay kamid tahay dowladaha ku garabsiinaaya ololaha socda.